Ciidanka Xoogga Dalka oo Howlgallo ka sameeyey nawaaxiga degmada Jamaame | Somali National Television - sntv.so
Home ARGAGIXISADA Ciidanka Xoogga Dalka oo Howlgallo ka sameeyey nawaaxiga degmada Jamaame
Ciidanka Xoogga Dalka oo Howlgallo ka sameeyey nawaaxiga degmada Jamaame
Kismaayo (SNTV)- Ciidanka Xoogga dalka gaar ahaan kuwa Komaandooska Danab iyo ciidanka Jubbaland oo iskaashanaya ayaa saakay hawlgallo ka sameeyay deeganada Jiinka Wabiga ee hoos taga degmadda Jamaamme.
Aroortii hore ciidanka waxaa ay dagaal kula wareegeen tuulada malayley oo kaabiga ku haysa degmadda Jamaamme ee gobolka Jubbada Hoose.
Goobta lala wareegay waxaa ay xarun ay ku dhuuntaan u ahayd kooxda argagixisadda Al-Shabaab, ayadoo la rumeysan yahay in ay ku hagaajin jireen walxaha Qarxa sida Miinoyinka wadadada la dhigo oo ay dadka shacabka ku dhibaateeyaan.
Goobtan laga xoreeyay cadawga iyo xarumo kale oo gediga kale ee Wabiga ahba waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xoogga dalka iyo Kuwa Jubbaland ee isku garabsanaya la dagaalanka kooxda argagixisadda Al-Shabaab ee uu gabalkooda dhacay.
Previous articleHay”adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya oo xafiis cusub ka hirgelisay Gedo
Next articleTartanka Ciyaaraha Fudud oo maanta lagu qabtay Muqdisho